Shiinaha Dhalo Kaabsal PET warshad Cagaaran iyo soosaarayaasha | Baakadaha Qianduo
Wuxi Qianduo Baako Technology Co., Ltd.
Dhalo Kaabsal PET Caddaan
Dhalo Kaabsal HDPE CFB-25
Dhalo Kaabsal PET Cas
Dhalo Kaabsal PET Green
Dhalo Kaabsal PET Brown
Maalmahan, dad badan ayaa ka fikiri doona caddaanka markii ugu horreysay markay dooranayaan midabka dhalooyinka caagga ah. Caddaanku runtii waa noocyo badan waana la jaan qaadi karaa midab kale. Si kastaba ha noqotee, dad badan ayaa rajeynaya in midabka baakadaha wax soo saarka uu noqon doono mid firfircoon oo hodan ah. Cagaar sidoo kale waa midab caadi ah oo umuuqda mid raaxo leh. Dad badan ayaa jecel udgoonka cusub iyo kan dabiiciga ah ee cagaarka, laakiin way adag tahay in la fahmo isku-darka midabka marka laga reebo cagaarka ku jira dhalooyinka caagga ah.
Maalmahan, dad badan ayaa ka fikiri doona caddaanka markii ugu horreysay markay dooranayaan midabka dhalooyinka caagga ah. Caddaanku runtii waa noocyo badan waana la jaan qaadi karaa midab kale. Si kastaba ha noqotee, dad badan ayaa rajeynaya in midabka baakadaha wax soo saarka uu noqon doono mid firfircoon oo hodan ah. Cagaar sidoo kale waa midab caadi ah oo umuuqda mid raaxo leh. Dad badan ayaa jecel udgoonka cusub iyo kan dabiiciga ah ee cagaarka, laakiin way adag tahay in la fahmo isku-darka midabka marka laga reebo cagaarka ku jira dhalooyinka caagga ah. Midab dhigista dhalooyinka wax lagu baakadeeyo iyo sumadaha, dad badan ayaa doorta inay iswaafajiyaan iyadoo loo eegayo dookhooda gaarka ah. Waxaa la dhihi karaa "dabocase iyo khudaarta waxay leeyihiin dookhyadooda", dadka isticmaalana waxay dooran doonaan midab kasta. Si kastaba ha noqotee, ujeedada shakhsi ahaaneed, waxaan u baahanahay inaan tixgelinno quruxda iyo raaxada.
Fasalka CuntadaManufacturer 10cc 50cc 100cc 150cc 250cc 300cc Faaruq ah PET PE HDPE Caaga Caddaan Cad Oo Aan Caadi Ahayn
Mindin lagu durayo
Qaab ku afuuf
Maaddada loo yaqaan 'Ethylene oxide' ayaa disha bakteeriyada
Kormeerka muunad qaadista
Midabkee ayuu cagaaran u dhigmaa?
Dhamaan midabada, cagaarka ayaa ka mid ah kuwa ugu adag ee la jaan qaadi kara. Ciyaar wanaagsani waxay dhalada wax lagu baakadeeyo ka dhigeysaa mid nool, mid dhalinyaro ah oo xamaasad badan leh, oo leh dareen aad u xoog badan oo dabiici ah. Haddii ciyaartu aysan fiicnayn, way fududahay in la isku buuqo. Cagaar ayaa ugu habboon midabbada soo socda: - 1, caddaan: cagaar cad leh waa maalin, sidaa darteed xagga hoose, waxaad dareemi doontaa nadiif, dhalaal, xarrago, waxaana jira daruuro cad, oo cagaarka ka hooseeya; 2, madow: cagaarka khafiifka ah waxaa iska leh nidaamka midabka madow, madowna sidoo kale wuxuu iska leeyahay nidaamka midabka madow. Sidaa darteed, laba midab oo isku mid ah ayaa dadka ka dhigi doonta inay dareemaan raaxo. Tartan noocaan ah ayaa la dareemi doonaa sharaf; 3, cawl: ayaa hore loo yiri midabku waa cadaan, midab waliba wuu la jaan qaadi karaa cawl, waxay kuxirantahay sida aad uxirato. Marka, cawl sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa cagaar khafiif ah, jawiga; 4. Casaan: cagaar sidoo kale wuxuu u dhigmi karaa casaanka. Dabcan, waa in lagu waafajiyaa casaanka fudud, ma ahan casaanka weyn. Midabka dabeecadda waa cagaar iyo casaan, taas oo ah xilli firaaqo iyo dabiici ah; 5, huruud khafiif ah: cagaaran, oo hurdi khafiif ah wada leh, sidoo kale waa mid quruxsan. Toddobada midab ee qaanso roobaadka, cagaar iyo huruud waxaa leh midabka dhexe, waxayna dareemi doonaan dhalaal iyo wada dhaqaaq.
Hore: Dhalo Kaabsal PET Brown
Xiga: Dhalo Kaabsal PET Cas
Dhalo Kaabsal PET Yellow
Dhalada Kaabsal PET Transparent
Dhalo Kaabsal PET Black
Wuxi qianduo teknoolajiyada wax lagu duubo ee Co., Ltd. waa mid ku takhasusay ku hawlan naqshadeynta iyo soo saarida dhammaan noocyada dhalada, sida dhalada kareemka, dhalada daawada.